Body & Sex – Körper & Sex – Page 2 – Tips for refugees
Category: Body & Sex – Körper & Sex
Wiilka saaxiibkayga ah oo (17) jir ah waa mid curyaan ka ah hoosta dambe. Shalay wuxuu ii sheegay in ay hooyadiisu ka xiirto timaha ku baxa hoosta aaga xubnaha taranka. Midaas oo ay sabab u tahay nadaafada uu sharciga Islaamku amrayo. Maxaa laga wadaa midaasi? Muhiim miyay tahay in loo xiiro timaha?
Sharciga nadaafada macnaheedu waxay tahay in nadiif la ahaado, sida ay diintu amartay.
Islaamku wuxuu sheegayaa in qofka Muslimka ahi uu ahaado qof nadiif ah marka uu tukanayo.
Wiilka saaxiibkaaga ah waa wiil jir ahaan naafo u ah.
Waxaa dhici karta in uusan awoodin in uu tukado.
Haddii uu tukan karo, markaasi waxaa laga yaabaa in uu asaga iska xiiro timaha hoose.
Haddii uu yahay qof diin leh, waa in uu u hoggaansamo sharciyada diinta.
Midaasna waa mid uu asaga uun go’aansan karo.
Sidoo kale asaga wuxuu go’aansan karaa marka uu rabo in loo xiiro timaha.
Laakiin asaga ma ahan qof Muslim xun ah haddii uusan iska xiirin timaha hoose.
Waxaa dhici karta in uusan ku faraxsanayn in ay hooyadiisa ka xiirto timaha hoose.
Asaga ayaa go’aansanaya qofka ka xiiraya timaha hoose.
Wiilka saaxiibkaaga ah wuxuu leeyahay xuquuqo shakhsiyeed.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in uu asaga go’aansanayo waxyaabaha jirkiisa ku saabsan.
Oona qofna ku khasbi karin in uu sameeyo waxyaabo uusan ku faraxsanayn.
Ma ahan xitaa in uu yahay qof naafo ah.
Posted on September 28, 2018 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Saaxiibtayda waxay ii sheegtay:In ay isticmaasho “faraantiga ka hortagga uurka”.Weligay ma aanan maqlin.Waa maxay?Sidee ayuu u shaqeeyaa?
Faraatiga ka hortagga uurka waa wax looga hortaggo uurka – sida kiniiniga oo kale.
Faraatiga wuxuu jirka ku siidaayaa hoormoon.
Hoormoontan waxaa loogu talogalay in ay ka hortagto uurka.
Takhtaradaada dumarka ayaa warqad daawo ama rijeeto kuu qori karta.
Adiga oo isticmaalaya rijeetada, waxaad ka qaadan kartaa faraatiga ka hortagga uurka farmashiga.
Waa in aad geliso faraatiga ka hortagga uurka siilka.
Faraatiga ka hortagga uurka wuxuu halkaasi ku jirayaa saddex toddobaad.
Markaas ka-dib, waxaad ka saareysaa faraatiga ka hortagga uurka siilkaaga.
Waxaad sugeysaa toddobo maalmood ka-dibna geli faraatiga ka hortagga uurka oo cusub.
Waxaa wanaagsan in aad geliso xasuusin kalandaariyahaaga.
Muhiim ah:Hoormoonta waxaa ay kugu reebi kartaa saameyn aan wanaagsanayn.
Takhtaradaada dumarka ayaa ku siin karta talo arrintan ku saabsan.
Sidee ayaad u gashaneysaa faraatiga ka hortagga uurka?
Marka hore, raadso boos aad raaxo ku qabto.
Waad kada-loobsan kartaa.
Ama waxaad hal lug saari kartaa geeska baafka qubeyska.
Waxaa ku majuujisaa faraatiga suulkaaga iyo fartaada murugsatada.
Hadda ku riix faraatiga ka hortagga siilkaaga.
Waxaad ogaan doontaa in uu ku sugan yahay goobta saxa ah marka aadan dareemi karin.
Posted on June 21, 2018 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Saaxiibkey iyo aniga (oo 17 sano jir ah) waxaan ku talo jirnaa in aan isu galmoono maalmaha fasaxa ee toddobaadkan.Balse waxaa igu dhici doonta caado.Ayeeyadey waxay dhahdaa:Galmada la galmoodo xilliga caadada waa najaas.Run miyaa midaasi?
Galmada xilliga caadadaada waxyeelo ma laha.
Haddii labadiina aad doonaysaan, waa caadi.
Dumarka qaarkood waxay jecel yihiin galmo xilliga caadadooda qaarna ma jecla.
Sidoo kale, ragga sidaas ayay u kala duwan yihiin.
Diimaha qaar, galmada xilliga caadada lama oggola.
Balse taasi waa arrin aaminsanaan.
Haddii aad aaminsan tahay, daacad ayaad u ahaan kartaa.
Caafimaad ahaan, galmada xilligaasi dhibaato ma laha.
Waxa muhiimka ah waa in aad labadiinaba raaxo ku dareentaan.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo galmoodo inta lagu guda jiro xilliga caadada haweenayda.
Waxaad si tartiib ah u taataaban kartaan xubnaha taranka ee midba midka kale.
Ma doonaysaa guska in uu galo siilka?
Markaasi fadlan hubso in aad sameyso sidaan soo socota:
Isticmaal waxyaabaha uurka looga hortago xataa xilliga caadada.
Waxaa wanaagsan in la isticmaalo cinjirka loo yaqaano kondhomka.
Waxaad weli qaadi kartaa uur inta lagu guda jirro waqtigan.
Cudurrada galmada lagu kala qaado ayaa si aad u fudud la isugu gudbiyaa xilliga caadada.
Hubso had iyo jeer in aad iska saarto suuliyaha caadada ka hor inta guska uusan gelin siilka.
Aniga (oo ah16 sano jir) waxaan lahaa caado shan maalmood ah.Shalay waxaan la galmooday wiil.Ma adeegsan waxyaabo looga hortaggo uurka. Si kastaba miyaan uur qaadi karaa?
Haa, waxaad qaadi kartaa uur xilliga caadada.
Waa arrin aan aad u dhici karin.
Balse weli, way dhici kartaa.
Ukuntaada waxay keliya bacram tahay inta lagu guda jirro waqti cayiman oo bil kasta ah.
Bacram waxaa loola jeedaa:
Waxaad qaadi kartaa uur haddii aad galmooto difaac la’aan.
Waxaad bacram tahay waxyar ka hor ugxan siideynta.
Waxaad si gaar ah bacram tahay xilliga ugxan siideynta.
Waxaad sidoo kale bacram tahay waxyar ka hor ka-dib ugxan siideynta.
Xaqiiqdii ma garan karto marka ay dhaceyso ugxan siideyntaada.
Taasi waxay dhacdaa waqtiga u dhaxeeya caadooyinkaaga.
Marwalba ma leedahay keliya dhowr maalmood oo u dhaxeeya xilliyada cadooyinka?
Inta lagu guda jirro galmada, minada ragga waxay geli kartaa xubintaada taranka.
Minada waxay bacramin kartaa ukuntaada ku dhowaad shan maalmood.
Waxaa dhici karta in ugxan siideyntaada ay noqoto inta lagu guda jirro waqtigaas.
Fadlan u tag takhtaradda gynecologist, oo loola jeedo takhtaradda dumarka.
Way ku caawin kartaa, xataa haddii aadan uur qaadin shalay.
Way ku baari kartaa waxayna ku siin kartaa talo.
Saaxiibteyda ( oo 15 sano jir ah) waxay qaadaneysaa kiniinka ka hortagga uurka.In badan ayaan wada seexanaa.Mararka qaarkood waxay ilowdaa in ay kiniinka qaadato.Uur ma qaadi kartaa?
Haa, saaxiibtaada uur wey qaadi kartaa.
Kiniinka in waqtigiisa la qaato aad iyo aad ayay muhiim u tahay!
Balse“waqtigiisa” waxay yeelan kartaa macno badan iyadoo ku xiran nooca kiniinka.
Saaxiibtaada miyay qaadanaysaa kiniinka loo yaqaano mini-pill?
Kiniinka loo yaqaano mini-pill waa in la qaato waqti isku mid ah maalin kasta.
Saaxiibaada waa in ay xasuusin ku xirataa telefoonkeeda gacanta.
Telefoonka ayaa cod bixiya:Hadda waa in ay qaadato kiniinka loo yaqaano mini-pill.
Haddii kiniiniga mini-pill-ka ay goor dambe qaadato ama ay gebi ahaanba ilowdo:
Markaasi difaaca ka difaaci lahaa uurka waa daciif.
Haddii taasi ay dhacdo; sidoo kale isticmaal cinjirka kondhomka loo yaqaano xilliga galmada ilaa laga gaaro xilliga uu ku dhaca caadada xigta.
Waxaa laga yaabaa in ay qaadanayso kiniinka joogtada ah.
Saaxiibtaada waa in ay kiniinka qaadato maalin kasta.
Ku dhowaad waqti isku mid ah.
Haddii ay ilowdo kiniinka:
Fadlan sidoo kale isticmaal cinjirka kondhomka loo yaqaano xilliga galmada ilaa laga gaaro xilliga ku dhaca caadada xigta.
Haddii ay mar kasta ilowdo kiniinka:
U taga takharka dumarka (gynecologist), idinkoo wada socda, waxaadna heshaan xoogaa talo ah.
Waxaa jira noocyo kale oo ka hortagga uurka ah.
Anigu waxaan ahay 14 sanno jir. Waxaan u isticmaalay tamboonooyin dhiigayga caadada dhowr bilood. Shalay waxaan iloobay in uu hoosta iigu xiranyahay tambooni kadibna waxaan xirtay tambooni cusub. Hadda ma awoodo in aan banaanka usoo saaro tamboonahaygii hore. Maxaan sameeyaa?
Midaan waxay ku dhacdaa dumar baddan.
Mararka qaar adiga ayaa iska soo saaraya tambooniyaha.
Ayadu ma ahan mid “luntay”.
Xubinka taranku waa mid uun jira dherer ahaan dhowr sentimitir.
Halkan waxaa ku qoran talo siin yar.
Kadaloobso ama ku fadhiiso musqusha.
Isku day in aad nasatid.
Waxaa fiican marka aad nasantahay.
Waxaa dhici karta in aad qabatid tambooniyaha ama kusoo jiidid farahaaga.
Sidoo kale isku day in aad “hoos ugu riixdid” murqahaaga.
Mararka qaar tambooniyaha wuxuu iskiisa ugu soo baxaa banaanka marka aad riixdid.
Haddii aanan midaasi kuu shaqaynin waa in aad isla markiiba aadid dhakhtarkaaga dumarka.
Ayada/asaga ayaa ku baari doona kaagana soo saari doona tambooniyaha sida ugu dhakhsiyaha baddan.
Tambooniga la isku iloowo wuxuu kaa dhigi karaa in aad xanuunsatid.
Sidaas darteeda waa in aad dhakhso ugu tagtid dhakhtarkaaga dumarka.
Xitaa haddii aadan hubin in uu weli tambooni kuugu jiro.
Ma ahan mid laga xishoodo.
Waa muhiim si aadan u xanuunsanin.
Saaxiibtayda waxaa ku dhacay dhiigeeda caadada. Waxayna doonaysaa in ay hadda galmo ila samayso. Midaasi caadi miyaa? Ayadu waa mid aan nadiif ahayn wakhtigaan.
Haddii aad labadiinuba doonaysiin in aad galmo samaysiin waad samayn kartiin inta lagu guda jiro muddada dhiiga caadada.
Ereyga “aan nadiif ahayn” ma ahan erey wanaagsan.
Midaasna macnaheedu waxay tahay qofta dumarka ahi ma ahan mid xaaladeedu fiicantahay inta lagu guda jiro dhiigeeda caadada.
Midaasi run ma ahan.
Gabdhaha iyo dumarkuba waa in ay si joogta ahi u qubeystaan inta lagu guda jiro wakhtigaan.
Dhiiga caadada waa dhiig dabiici ah.
Marka uu dhiig kaa yimaado ma tihid adigu qof “aan nadiif ahayn”.
Dhiigaagu ma ahan mid xun.
Waxaa jira qaabab baddan oo loogu samayn karo galmo wanaagsan.
Xitaa inta lagu guda jiro muddada dhiiga caadada.
Tusaale ahaan, in la taab-taabto kintirka banaanka ka ah xubinka taranka.
Midaasi waxay siinaysaa inbaddan oo kamid ah gabdhaha iyo dumarkaba dareen aad u wanaagsan.
Ama taabashada iyo riix-riixida xubinka taranka raga.
Midaan waxaa lagu magacaabaa salaaxid.
Inbaddan oo kamid ah gabdhaha iyo dumarka waxay si gaar ahi raaxo u dareemaan inta lagu guda jiro muddada dhiigooda caadada.
Galmadu waa mid si gaar ah ayaga ugu fiican wakhtigan.
Kala hadal saaxiibtaada waxa aad labadiinuba jeceshihiin.